Jadwalka Hal-abuurka Bilaashka ah ee 2015 | Abuurista khadka tooska ah
Ficil ahaan bil ayaa ka hartay tan sanadka 2014. Waa xilligii aan bilaabi lahayn inaan cusboonaysiinno nafteena isla markaana aan qorsheyno nafteena si aan awood ugu yeelano sanadka soo socda xamaasad iyo xamaasad. Qaab wanaagsan oo lagu soo dhaweyn karo marxaladdan cusub ayaa ah inaad qaabeyso ama sameysato kaalandar kuu gaar ah. Xusuusnow taas wax kasta oo inagu xeeran oo xiriir nala leh ayaa saameyn nagu leh hal dhinac ama mid kale. Hadba inta hal abuur leh cunsurrada iyo naqshadaha nagu hareeraysan, jawiga wanaagsan ee aan dhisi doonno si aan ugu horumarinno nafteenna mihnaddeenna iyo jadwalka ayaa ka mid ah walxahaas aan xilliyada qaarkood fiirino.
Kalandarka, ajandaha ama almanacyada ayaa ah cunsurro sidoo kale soo bandhigi kara hal-abuurnimo iyo dhiirrigelin dhammaan kuwa iyaga arka. In kasta oo ay xaqiiqda tahay in waayahaan dambe waxaas oo dhami ay yihiin kuwo dijitaal ah oo taageerada dhaqameed ay lumineyso tixgelinteeda, aniga shaqsiyan aniga (iyo waxaan u maleynayaa in kuwa kale oo badan) ikhtiyaarka soo jireenka ah wali wuxuu ila muuqdaa mid aniga iga fiican. Ku qorista gacantayda ku jirta qorshahayga dhammaan howlahaas iyo waxqabadyada aan sugayo maalmaha soo socda ayaa igu dhowaaday caado aniga.
Wax kasta oo habkaaga iyo dookhaaga ah, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho qalabkan noocyada ah si aad uhesho abaabul ballaaran iyo xakameynta shaqadaada. Hoos waxaan ku soo jeedinayaa xulashada jadwalada hal-abuurka iyo wax-beddelka ah ee sannadka dambe ee 2015 oo laga soo saaray Freepik. Iyaga ku raaxee!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Jadwalka Hal-abuurka Bilaashka ah 2015